Tao aorian’ny firahana-miombom-bavaka tao amin’ny FJKM Andafiatsimo Ambatolampy dia nidina teny an-tsena nividy ny vokatr’ireo tantsaha Ramatoa Lalao Ravalomanana androany. Niezaka nijery ifotony ny fiainam-bahoaka izy ary nisy mihitsy aza ny fiarahana nitafa tamin’ireo ampahan’ny tantsaha tamin’izany .Nisy ihany koa moa ny fihainoana ny hetatehan’ireo vahoaka sy ny tantsaha amin’iny faritra Ambatolampy iny. Nifanesika sy nifanitsa-kitro ny olona izay samy te handray tanana azy avokoa . Nanofahofa ny tanana sy lambakely teny an-tanana ny olona ,tao ny nilaza fa hatramin’izay nialan’ny Filoha Ravalomanana Marc teo amin’ny fitondrana dia nahatsiaro ho kamboty ireto tantsaha ireto . Ankehitriny anefa dia velom-bolo raha vao nahita fa anisan’ireo kandida ho Filoham-pirenena Ramatoa Lalao Ravalomanana ka manantena indray ny fisondrotan’ny fari-piainany ireo tantsaha.Nisy tamin’ireo vahoaka nolalovany no latsa-dranomaso . Nampahery an’ireto vahoaka ireto izy tamin’izany fa raha vonona ianareo,hoy izy, dia hiara-hanagana firenena vanona isika ary tsy atao ambanin-javatra ny tatsaha Malagasy satria izy dia zanaka tantsaha ihany koa .Koa raha ny fahitana ny fihetsiky ny vahoaka tamin’izany dia hita fa mbola ao am-pon’ny tantsaha ny Filoha Ravalomanana, ka na na vao I Neny aza no mbola eto an-tanindrazana dia antenain’ireto tantsaha ireto fa vonona ny hampiarina indray ny fiainan’izy ireo amin’izao krizy lalina izao izy.
8 pensées sur “Lalao Ravalomanana : akaiky ny tantsaha hatrany”
Ok re ry Madama â ! Ny faharoa ihany no ho voalohany ny antsika !
Faly aho, ary tena faly be, fa tsy hoe faly kely fotsiny !!!
Hita fa tena olona hendry ianao, olona mahay mihaino sy mandinika soson-kevitra !
Milay be ilay kifafa miaraka amin’ilay ramama !
Mety be amiko ilay « symbole », ary tokony hivimbina an’io daholo ny vahoaka satria tena mila diovina mihintsy ny tanàna izay tena feno fakofako ; mila diovina ihany koa ny sehatra…..paolitika !
Be loatra ny loto eto amin’ny tanàna !
Tena mety, ary mba miangavy anao hanohy ny fitsidiana an’ireto vahoaka izay hita fa tena reraka sy very hevitra ê ! Velom-bolo ary hita fa feno fanantenàna ry zareo na dia mahita ny endrikao fotsiny aza ! Endrika mirana ary tsy misy fiatsarambelatsia, ary endrik’olona mitaky fiovàna sy sy fandrosoana ary fandriampahalemana !
Mahita ny ataonao ilay domelina manarapenitra dia mia-gaigy isan’andro vaky izao !
Aiza ka zavatra tsy mbola vita no hoe tokànan’ilay tsy misy ati-doha ! Laniana amin’ny famokisana toaka ny volam-panjakàna, ny vahoaka ery terena hihinam-balala !
Tena tsssssssssssss !!
Tsy mahavoa anao ireo ê !
Amin’ny manaraka, dia mba ireo marary any amin’ny hôpitaly indray ê ! Sanatriavin’ny vava novadin’ny lela, tsy manome baiko ary miala tsiny, fa mba fiangaviana kely fotsiny ê ! Maro loatra amin’izy ireo no sady efa sedrain’ny aretina no mbola zara raha misakafo !
Manantena fiovàna avy aminao ihany koa izy ireo ; fanohizana ny asa natao sy vitan’i Ramose no tena marina kokoa !!
Hita mantsy amin’izao fotoana fa tena misy lesoka be izany resaka fitsaboana izany ! Atao mahagaga ve, rahatoa ka lany amin’ny rendrarendra sy zavatra tsy ilain’ny vahoaka ny volam-panjakàna, rehefa tsy nangalarina sy nalefa any ivelany ?
Ilay dondrona mba milaza fa manangana hôpitaly manarapenitra, fa ilay izy toa natao hitsaboina ny vahiny any avarabaratra any, fa tsy natao hitsaboina ny vahoaka malagasy iray manontolo akory !! Eny ê, ny vendrana dia ho vendrana eny ihany !
Mitohy ny tolona !! Masina ny Tanindrazana !
Andeha hitsangatsangana eraky ny vazan-tany indray hono i Beatrisy ! Hanao inona ?
Misy zavatra tsy miady angaha ny natao, satria toa hoe laniny tekinika ihany ny azy ?
Tsy hamarinina angaha ny vola be izay nolaniana tamin’ny « fanamboarana » an’ilay laozisiela, ilay laozosiela lany daty satria TSY MAHAZO MANDRAY ANJARA AMIN’ILAY FIFIDIANANA IREO MPANONGAM-PANJAKÀNA REHETRA ?
TSY ALEO VE MBA HIKARAKARÀNA NY VAHOAKA NY VOLA, RAHATOA KA MISY HO LANIANA IHANY Â ??
Ho lanilaniana amin’ny fitsangatsangànana fotsiny ve ? Inona moa no hahataitra anao amin’izany, fa mihemotra ny fifidianana dia mitombo ihany koa ny vola raisinareo ao amin’nity SENITA tsy alehany ity ?
Fa rehefa hijery an’ireo Vondrona isan-karazany ireo ihany ianao ramatoa, dia izao lazaina azireo satria na ianao aza tsy mahafantatra an’ilay izy akory !
Izao lazaina : Madagasikara amin’izao fotoana izao dia tahak’ireny olona marary ireny. Ny mampalahelo dia ireto mpanampy mpitsabo (Infirmiers sy infirmières) dia rehefa tsy vendrana sy kaondrakaondrana, dia somary sembana daholo ; ary ny tena loza dia ireo dokotera izay samy milaza ny tenany ho tena katraka sy spesialista dia olona adala tokony alefa eny Anjanamasina daholo izy mianakavy, satria ny fanafody fanefitr’aretina izay omeny, dia vao maika mamono ilay marary ! Fanafody sady mankadoa no tena poizina !
Izany lazaina amin-dry zareo, rahatoa ka mbola anisan’ireo mbola misaina ianao ! Ny tena marina, dia tsy ilaina akory ny mivoaka an’i Madagasikara mba ilazànao an’izany, fa ao an-toerana dia efa afaka manao an’izany fanambaràna izany ianao !
Mamerovero daholo izay lalovany , za koh tena FALY ary latsa-dranomaso eto am-
pamakiana ny soratr’i Solo Razafy izay hisaorako be dia be koa, Mnkasitraka e!!!!
Rehefa mba sambatsambatra vao maraina Kintana dia aza maka « L » @ Beatrisy indray a!!avelao izy hanao izay hataony any
fa ho tsarain’ny tantara eo daholo ireny, ny tolontsika hatrehana lesy a!
Ireo dokotera dia efa ao anatin’ilay TETIKA HO FAMONOANA NY GASY ANKOLAKA DAHOLO IZANY KOA AZA ATAO MAHAGAGA.
VONOINA NY GASY MBA HANOMEZANA FAHAFAHAM-PO NY MPANJANAKA @ FANDROBANY NY HARENTSIKA, EFA MAZAVA
BE NY @’ IO.
Ity resaka kofafa dia tsy tongatonga hoa azy tokoa fa tena mila KOFAFA BE MIHINTSY GASIKARA ary raha misy zavatra azo takiana
voalohany @’izao fahavoazana izao dia KOFAFA.
Hilana io kofafa io daholo hatrany am-potony faratampony ka atra-ty ambany indrindra dia ny FAKOFAKOM-POLITIKA, FAKOM-PIANGONANA, FAKOM-PIARAHAMONINA, FAKOM-PIHAVANANA, ny fako eny @ ARABE REHETRA TSY LAZAINA INTSONY
ireo FAKOFAKON-DRAHA REHETRA izany e!mila fanadiovana daholo izany mba hiverenan’ilay soa toavina indray.
Ataoko fa tsy sarotra ilay izy rehefa ao @ tsirairay ny FANDAVAN-TENA fa mila mpitarika TOA ITO OLONA TSONGOIN’ OLOM-
BOLO ITONY ISIKA mba ahafahantsika manatanteraka izany i NENY IZANY SAO MISY MIAKAPOKAPOKA EO INDRAY an!!!
‘ manko neny ô!!!
21 mai 2013 à 11 h 09 min
Mandehana miverina matory fa aza be kritika eo ê ! Angaha raha nataon’ny bandy soratra kely ny kifafa dia tsy maintsy natao ngôdabe ny KOFAFA ????
Ianareo manao hoe KOFAFA, ny anay K’FAFA !! MDR !!
Dia tena lasa natory ?? Mitsangàna fa be ny asa ê !! Izao ka ry Ban Ki Moon avy no milaza fa tsy ara-dalàna ny zava-miseho ! Manara-kefa an’izay voalazan’ny sasany fotsiny !
Tsy menatra manome baiko an’ny vahoaka malagasy, ary miteny hoe : Ataovy am-patoriana ny asa tsy maintsy atao !
MBA ENDRY SY MANAO NY MARINA, REHEFA MANGALATRA SY MAMONO OLONA !!!
« k’fafa » marina ve no izy e?afa-barakan’i Zėzu marina!
Kely maso anie i Ban Ki Moon e!Gena aza mbola azo leferina.
Maloton’alika anie ireo kely maso ireo e! nahazo ny tsY fahitany tany angah rangah ka nivadika
daholo ny rasa,tsy atao mahagaga izany fa ilay zara2 hanjakana e!
Efa mampifilafila amin’ny vola hanaovana fifidianana ny sasany satria tsy dia ny fifidianana loatra no mahamay andrizareo fa ny fametrahana ny amboakeliny hitondra an’i Madagasikara.
Mahita izao fitavan’ny malagasy ny tantsaha tafita tahaka azy izao no mahatonga an’ireo ho romotra. Satria raha vao fifidiananana madio no atao eo dia handresy ny lehiben’ny tantsaha Ravalomanana.
Marihina fa ny 80%n’ny malagasy dia tantsaha raha vao ny 50% ireo fotsiny no mifidy an’i Lalao Ravalomanana dia very fihinanana ny mpandroba.
Mitohy ny tolona ary aoka hatao ny fifidianana fa izay no vahaolana amin’izao krizy izao.
Saiky hanao dongy tsy hanao fifidianana i Ravalomanana teo nolazaina hoe tsy te hampandroso ny firenena. Izao ny ankolafiny mirotsaka ny ho amin’ny fifidianana dia ry zareo indray no avo vava hoe tsy mety.
Mbay ary e!
Lalao Ravalomanana no ho filoha izay no tanjona hatreto, na hanome vola ny mpitsetsitra na tsy hanome. Hisy hanome vola eo indray io fifidianana io dia hisy himenomenona indray.
Mmitohy ny tolona
21 mai 2013 à 20 h 40 min
Tsara ilay kifafa…. Tonga raofy @ kifafa mihintsy….mrd…
Précédent Article précédent : Lalao Ravalomanana :“ Havaoziko isa maraina ny famindram-poko »
Suivant Article suivant : Lalao Ravalomanana : nitsidika sekoly nanabeazana azy